On-kure yokugezera maoko - China Cixi Zhonghe utsanana
On-kure yokugezera maoko
Mvura zvaparadzwa kana isu kugeza, chikuru chikonzero ndechokuti hatigoni kubvisa mvura time.Now yokugezera ichi inogona kugadzirisa problem.When ichi tinoshandisa mvura inodziya uye kubva mvura, uye isu apandukira zvakare, kuti mvura achiri warm.Can kudzivisa tembiricha kuchinja. Pfungwa Kuparadzirwa shawa nzira yokubudisa anogona kuchengeta mvura conservation.This yokugezera ruoko inovakwa pamusoro ABS, uye vane electroplate.And vakanaka Laser kuchifinha pamusoro yokugezera ruoko Panel. Mvura iyi inogona kubviswa, zviri nyore kuti ugeze mukati.
Mvura zvaparadzwa kana isu kugeza, chikuru chikonzero ndechokuti hatigoni kubvisa mvura time.Now yokugezera ichi inogona kugadzirisa problem.When ichi tinoshandisa mvura inodziya uye kubva mvura, uye isu apandukira zvakare, kuti mvura achiri warm.Can kudzivisa tembiricha kuchinja.
Pfungwa Kuparadzirwa shawa nzira yokubudisa anogona kuchengeta mvura conservation.This yokugezera ruoko inovakwa pamusoro ABS, uye vane electroplate.And vakanaka Laser kuchifinha pamusoro yokugezera ruoko Panel. Mvura iyi inogona kubviswa, zviri nyore kuti ugeze mukati.
Previous: On-kure yokugezera maoko
Next: On-kure yokugezera maoko
Chrome kuifukidza Shower Set
Expandable Shower zvishoma nezvishoma mumatope Rail
Metal Shower zvishoma nezvishoma mumatope Bar Rail
Metal Shower zvishoma nezvishoma mumatope Rails
Mvura Cabinet zvishoma nezvishoma mumatope Rail
Shower Door zvishoma nezvishoma mumatope Rail
Shower pedhi chikomboredzo
Shower Hose chikomboredzo
Shower Rail chikomboredzo
Shower zvishoma nezvishoma mumatope Bar zvishoma nezvishoma mumatope Rail
Shower Sprayer pedhi
Shower Wall chikomboredzo
Multifunctional ruoko shawa ZH2055C-3
Multifunctional ruoko shawa ZH2010W-1